Ankapobe: Fiaretan-tory Ho Fiaraha-Mientana Amin’ny Tibetana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2012 23:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 한국어, Português, Swahili, Català, 繁體中文, 简体中文, Български, English
Hatramin'ny fiandohan'ny Febroary 2012, no nisy andiam-piaretan-tory nanerana izao tontolo izao ho fanehoana fiaraha-mientana amin'ny Tibetana, nanaraka ny antso avy any Kalong Tripa nataon'ny Dr. Lobsang Sangay. Koa satria moa ny 22 Febroary no taombaovao Tibetana, dia niantso hetsika fiaraha-mientana hafa ny mpikatroka.
Hita ao amin'ny YouTube ny fanambaran'i Lobsang Sangay ary etsy ambany ny ampahany amin'ny dikany amin'ny teny anglisin'izany kabary izany:
Sarintanin'ny fiaretan-tory ankapobeny ho fiaraha-mientana amin ny Tibetana ny 8 Febroary 2012.
Hatramin'ny nananiham-bohitra an'i Tibet no nanambaran'ny fitondrana Shinoa ny hananganany ny paradisa sosialista. Saingy tsy avela ho ananan'ny Tibetana ny zon'olombelona fototra, mihapotika ny tontolo marefo, zanahina ny fiteny sy kolontsaina Tibetana, voarara ny saritapaky ny Masina Dalai Lama, ary anjorom-bala ara-toekarena ny Tibetana. Azo heverina fa mihidy i Tibet. Tsy mahazo mitsangatsangana any Tibet ny vahiny amin'izao fotoana izao ary ambanin'ny lalàna miaramila tsy nambara ampahibemaso ny faritra iray manontolo.
Mandrisika ny tompon'andraikitra Shinoa aho handray ny hiakan'ny Tibetana sy ireo izay nandoro tena. Tsy azonao atonina amin'ny alalan'ny herisetra sy ny famonoana na oviana na oviana ny fahoriana tsy misy fitaky ny Tibetana sy ny filaminan'i Tibet. Ny fomba tokana ahafahana mamaha ny olana momba an'i Tibet hampaharitra ny fandriampahalemana dia amin'ny alalan'ny fanajana ny zon'ny vahoaka Tibetana sy amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Noho ny firotsahana lalina anaty fifampiresahana am-pilaminana, dia tsy azo ekena velively ary tokony melohin'ny vahoaka rehetra ao Shina sy manerantany ny fampiasana herisetra amin'ny Tibetana.
Miantso ny fiaraha-monina Iraisampirenena aho hampiseho firaisankina sy hanangam-peo ho fanohanana ny zo fototry ny vahoaka Tibetana ao anatin'izao fotoana saro-pady izao. Miangavy aho ny handefasan'ny Fiaraha-monina Iraisampirenena sy ny Firenena Mikambana handefa delegasiona hahita marina ny ao Tibet ary mba hahazo miditra ao amin'ny faritra ihany koa ny gazety avy any ivelany. Tokony ho fantatry ny mpitarika ao Beijing fa fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena sy ny lalàna shinoa izany famonoana ny “ao amin'ny ankohonany” izany, ary hametraka fisalasalana fanampiny eo amin'ny fitarihan'i Shina sy ny toerana misy azy manerana izao tontolo izao ara-barotra.
Nandritra ny fitsidihan'ny Filoha Lefitra Shinoa Xi Jingping tany Etazonia tamin'ny herinandro, dia tamin'ny alalan'ny fitantarana ny momba ny zon'olombelona any Shina no nitsenan'ny mpikatroka Tibetana an'i Xi sy ireo mpanohana azy efa voarindra.
Eto ambany ny lahatsary YouTube noraisina tamin'ny 15 Febroary tany Muscatine, Iowa:
Rehefa nanatomotra moa ny Taombaovao Tibetana, dia nanomana fiaretan-tory miaraka amin'ny labozia [zh] teo an-tokotanin'ny Biraom-pifandraisan'i Fitondrana Shinoa ho fisaonana ireo Tibetana mihiaka ny fanafahana an'i Tibet nandoro tena ny mpikatroka ao Hong Kong. Ankoatra izay dia nihoatra ny 240ny nanasonia ho amin'ny Androm-Pivavahana amin'ny Alalan'ny Fanilo dobera* ho fanehoana firaisankina amin'ny Tibetana:
Tao Tibet, ny 27 Feb 2009 ka hatramin'ny 19 Feb 2012, Tibetana 23 no nandoro tena ho hetsika hanafahana an'i Tibet sy hamerenana ny Dalai Lama. 15 amin'izy ireo no namoy ny ainy. Eo ambanin'ny fangejana mihatra any Tibet, dia ny fandoroana tena no fihetsika faratampony fampiharana ny tsy fanaovana herisetra. Lavitra dia lavitra antsika ny momba an'izany Tibet izany, fa amin'ny maha-olombelona, tsy midika izany fa tsy afa-manao na inona na inona isika. Farafaharatsiny, tokony hivavaka ho an'ny maty isika.
Iray amin'ny fombam-panahy eo amin'ny Bodista Tibetana ny manolotra labozian-dobera (menaka manitra) izay maneho ny fahitana ny fahendrena sy hanadiovana ny Karma ratsy. Araka ny finoany, afa-mandrehitra ho fahazavan'ny Tibetana nandoro tena ihany koa isika ary hivavaka ho an'i Tibet.
* Fanazavana: nampidirina ho mpampiatrano ny androm-Pivavahana amin'ny alalan'ny Fanilo dobera ny mpanoratra.
Hajiantsary sy sary asongadina mampiseho ny Diaben'ny Fanafahana an'i Tibet isan-taona ao afovoan'i London, UK, avy amin'i sinister pictures, copyright Demotix (12/03/11).